DAD BADAN OO SHUBAN-BIYOOD LOO SEEXIYAY ISBITAALKA BELEDWEYNE |
Bukaanno ku dhow 80 qof oo uu soo ritay cudurka shuban-biyoodka ayaa lagu daweynayaa isbitaalka guud ee magaalada Beledweyne. Bukaannada oo isugu jira carruur iyo dad waaweyn ayaa afartii maalmood ee la soo dhaafay laga kala keenay xaafadaha magaaladaas, sida uu sheegay Dr. Khadar Cabdullaahi oo ah madaxa qeybta gargaarka degdegga ah ee isbitaalka Beledweyne.
“Waxay u badan yihiin dad waaweyn oo laga keenayo xaafadaha Kooshin iyo Xaawo Taako,” ayuu yiri dhaqtarka. Labadaas xaafadood ayaa ah kuwa ugu daran ee ay saameysay fatahaadda.
Daahiya Axmed Warsame oo isbitaalka kula jirta habaryarteed oo lagu magacaabo Cadar Cabdi oo 40 jir ah, kana mid ah dadka uu shubanka soo ritay ayaa Raadiyo Ergo telefoonka ugu sheegtay in markii ay xalay fiidkii isbitaalka keenayeen ay xaaladdeeda liidatay, laakiin dhowr faleembo lagu suray oo ay hadda miyir-qabto, ayna hadli karto. Cadar wuxuu shubanka soo ritay saddex maalmood ka hor. “Markii ugu horreysay caloosha ayaa la iga hayaa bay tiri, waxaan u haysannay inay iska roonaan doonto, laakiin shuban iyo matag aan kala go’ lahayn markii ay ka bixi waysay baan go’aansannay inaan halkan keenno.”
Hay’adda ka shaqeysa arrimaha bani’aadannimada ee CESVI oo isbitaalka Beledweyne ka caawisa qeybta xaaladda degdegga ah ayaa sheegtay inay kordheyso tirada bukaannada uu soo ridanayo shuban-biyoodka ee la keenayo isbitaalka.
Dr. Khadar ayaa sheegay inay faafista cudurka u sababeynayaan nadaafad-darro ka dhalatay fatahaaddii Beledweyne. Bishii May ee sanadkan ayuu fatahaad sameeyay webiga Shabeelle oo mara magaalada Beledweyne, taas oo uu dhaqtarku xusay inay sababtay inay dumaan musqulo badan oo ay ku darmaan daadadka iyo biyaha ceelasha ay dadku cabaan.
Qeybta lagu baxnaaninayo dadka qaba shuban-biyoodka way ka mashquul badan tahay qeybaha kale sida uu ku soo warramayo weriyaha Raadiyo Ergo ee Beledweyne oo booqday isbitaalka. Dadka qeybtaas ku jira ee shubanka laga daweynayo waxaa ka mid ah Kaaho Maxamed Maxamuud oo markii hore isbitaalka kula jirtay wiilkeeda oo jira 11 bilood oo laga daweynayay malaariyo. “Isbitaalka ayay ku dhex xanuunsatay. Hadda maalintii labaad ayay qeybtan ku jirtaa oo dawooyinka ay qaadaneysaa, wiilkeedana waxaa lagu hayaa qeyb kale,” ayuu yiri walaalkeed Cali Maxamed oo la jooga.
Isitaalka Beledweyne ayaa tan iyo 19-kii bishii May diiwaangeliyay 517 qof oo uu soo ritay shuban-biyoodka, sida uu sheegay Dr Khadar
← Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid oo xil ka qaadis ku sameeyay Wasiirkii Boostada
JAAMACADDA CAMUUD OO DEEQ-WAXBARASHO SIISA ARDAYDA DHEGOOLEYAASHA AH →